Ejipta: Andro faha-15 Mitohy ny hetsika goavana · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Andro faha-15 Mitohy ny hetsika goavana
Voadika ny 09 Febroary 2011 6:29 GMT
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ireo tatitra manokana ataonay momba ny Hetsi-panoherana Ejipta 2011.
Mitohy mampihovitrovitra an'i Ejipta manontolo ny hetsi-panoherana efa ho 15 andro misesy, mangataka ny hialàn'ny fitondran'i Mubarak.
Vahoaka be, ny be indrindra hatrizay araka ny tatitra, no eo an-kianja Tahrir amin'izao fotoana, izay ivon'ny hetsi-panoherana ao afovoan-tanànan'i Kairo, toerana izay iomanan'ny maro handaniany ny alina. Fitorevahana iray koa no mitohy manoloana nytranoben'ny Parlemanta Ejiptiana, toerana iaingan'ny tweets mitatitra fa atsangana ao ny tranolay. Ary nanomboka nitokona ny mpiasa.
Androany ihany koa, nanatevin-daharana ny hetsika ireo profesora.
Mandritra izany, mitohy ny fanaovana antsojay amin'ny gazety mpampita vaovao, satria manomboka mahita lazaina ireo Ejiptiana mpanao gazety.
Ity ny anton-dresaka faramparany tao amin'ny Twitter:
@alaa: Hetsika manoloana any parlemanta , an'arivony vitsivitsy, tokony hanampy anay aty ireo olona mihoatra ao tahrir #Jan25
@ksharkawi: #Tahrir #Egypt ny #Jan25 Vaovao avy any an-kianjan'i Tahrir fa hoe mpanao fihetsiketsehana 2000 no mibodo ny parlemanta izao.
@CaireneGirl: mangataka ny sasany amin'ireo ao #tahrir ny mpanao fihetsiketsehana mba hikisaka hankany amin'ny antenimieram-bahoaka sy hanampy azy ireo. #jan25 #Egypt #freedom #democracy
@fustat: R @monasosh fitorevahana manoloana ny tranoben'ny antenimieram-bahoaka #Jan25 http://yfrog.com/hs9ghrlj
@WilYaWil: Kianja Tahrir androany tamin'ny 6 ora hariva CLT http://yfrog.com/h0plbswj [via @kalnaga] #egypt #jan25
@TripleM: An-dàlana ho any an-kianjan'i Tahrir aho. Tsy mampino fa sahala amin'ny hoe ny vahoakan'i Ejipta manontolo mihitsy no nirotsaka ho ao afovoan'i Kairo.
@H_Eid: Raha ho ao #tahrir ianareo, avy any amin'ny fidirana akaikin'ny Auc mandeha #Jan25
@rania_hafez: Eny izay no hataonay RT @HalaGorani: ramatoa iray nivoaka avy tao an-kianjan’ i Tahrir no vao avy niteny tamiko: Manàndrana mampiasa ny teknikan'ny katsaka anaty lapoaly ny governemanta fa mbola mitohy tonga hatrany izahay.”#Egypt
@nada208: Mitady sakafo ao Tahrir.. Raha ny fahitàna azy dia noraisin'ireo trano fisakafoanana sy ireny fivarotan-kanina tonga dia vonona ireny tam-pahamatorana tanteraka ilay fepetra tsy fahazoana mivezivezy!
@jimsciuttoABC: Hetsi-panoherana manoloana ny Moske ibrahim ao Alexandria, feno vahoaka be & sy tsiky tokoa #Egypt #Jan25 http://yfrog.com/h7g8izqj
Ary dia mitohy ny firahalahiana sy ny fifandraisna tsara eo anivon'ireo vahoaka be ireo:
@frommasr: Mandehandeha eny rehetra eny mifampizara mofo voasesika ny olona. Tsy hiala eto ny olona raha tsy miala i Mubarak. #tahrir
@Izbella: #tahrir Omaly tao Tahrir dia nisy rangahy iray nitodika tany amiko ary niteny hoe : “tandremo” sady nanondro ambany tamin'ilay ampahana sisin-dàlana vaky!! tsy mbola fahita teto Ejipta ny toy izany tany aloha!
Mandritra izany, mitohy hatrany ny fanaovana antsojay amin'ny Gazety mpampita vaovao:
@occupiedcairo: ny avy ao amin'ny NBS news voatàna tany an-dàlana ho any Suez. Nohadihadiana ary avy eo nalefa niverina tany Kairo. #mediablackout #jan25
@FourCM: Heno avy aminà mpanao gazety – tsy afaka namoaka ireo fahazoan-dàlana avy amin'ny governemanta ny foiben'ny fanaovan-gazety satria lany ny plastika tao aminy. #Egypt #jan25
@CaireneGirl: 1000 mahery manao fihetsiketsehana manoloana ny tranoben'ny Al-Ahram mitaky fanaovan-gazety malalaka, sy mendrika. #jan25 #egypt #freedom #democracy
@AnasAlaoui: Misedra olana anatiny sy/na fametraham-pialàna ny sasantsasany amin'ireo trano famoahan-gazety Ejiptiana. Mety ho teboka iray hafa mitondra amin'ny fiovàna mahery vaika io. #Egypt #Jan25
Ary ho an'ny maro, na dia tsy any Tahrir aza izy ireo, any kosa ny fony:
@esl4mdiaa: mbola am-perinasa. Tena marina, mikarakara ny raiamandreniko aho ary izany no manakana ahy tsy ho tonga any #Tahrir , tena te-ho any mafy mihitsy aho 🙁 #fb #jan25
@sheriny: Mitsangam-bolo toy ny akoho aho mijery ireo sary avy ao #tahrir androany. #Egypt #jan25 #feb8
Ary ireo ao an-toerana dia tsy mitsahatra ny mampahatsiahy an-dry zareo:
@Mohabkady: #Egypt #Jan25 Today; Manoratra aho hilazana fa ny Ainay eto an-kianjan'i Tahrir, io no aina tokony sy mendrika hiainana. Ho ela Velona i Ejipta
@asamir: Ho an'ireo namako malala rehetra tsy tonga tao an-kianjan'i Tahrir. Na izany aza: Tsaroanay foana ianareo.
Nisy ihany koa ireo hetsika notanterahana tany aminà tanàna maro hafa, toa an'i Alexandria, tanàna faharoa isan'ny lehibe indrindra ao Ejipta, Al Mahalla Al Kubra, Suez ary Ismailia.